Wax ka badan (* 12 *) 12 Talooyin si aad uga dhigto kulamada fog kuwa waxtar leh
23-F: Maalinta ugu adag ee Boqorka
Fiidiyowga Fiidiyowga Amazon (Video ku saabsan Baahida); Lluís Homar, Emilio Gutiérrez Caba, Mónica López (Jilayaasha)
Waxaan ognahay in isgaarsiintu ay noqon karto cidlo mararka qaarkood. Waxa kale oo aanu ognahay in wada shaqaynta khadka interneedku ay daaha ka qaadi karto karti urur oo aanad hore u taaban, sida qaar karti leh laakiin dadka aamusan ee ku jira shirarka fool ka foolka ah ay iftiimin karaan marka ay si dhab ah u shaqaynayaan.
Sheela Subramanian, Madaxweyne Ku-Xigeenka (* 12 *) Forum Future, wuxuu xooga saarayaa baahida (* 12 *) si loo maareeyo dhacdooyinka (* 12 *) si ku habboon habka aan u shaqeyno maanta, ma aha sidii aan horay u shaqeynay. Shirkadaha qaarkood ayaa isbeddelay halka shaqada laga qabanayo, laakiin wali waxay ku dheggan yihiin qaabab hore (* 12 *) sida shaqada loo qabto, ayuu ka digay.
"Maareeyayaashu waa inay diiradda saaraan natiijooyinka halkii ay ka ahaan lahaayeen (* 12 *) waxqabadka iyo soo-bandhigidda," ayuu yidhi.
Maxay tani ka dhigan tahay maaraynta fog (* 12 *) shirarka?
1 Isticmaal tignoolajiyada la isku halayn karo, oo si fiican u isticmaal
1.0.1 [Sidoo kale akhri: Adkeysiga Ganacsiga: IOS, Qalabka Mac ee iskaashiga fog]
2 Ka fiirso waxa ku jira
3 Fur channels
4 Yaa ku jira liiska?
5 Waqti u qaado shaqaalaha
6 Dhaqaaji jadwalka
7 Wax ka dabciga
8 Waqti ka dhig
9 Akhlaaqda wanaagsan ayaa muhiim ah
10 Waqti ka dhig mid aad u yar
11 Waan isku xireynaa, dhammaanteen waan isku xireynaa
12 Si fudud u dhig
Isticmaal tignoolajiyada la isku halayn karo, oo si fiican u isticmaal
Immisa shir ayaa lagu asteeyay fashil farsamo oo ay sababeen ka-qaybgalayaashu iyagoo garan la' sida loo isticmaalo tignoolajiyada? Immisa daqiiqo ayaa la khasaariyay iyadoo dadku isku dayayeen inay wadaagaan shaashadooda?
Waa mas'uuliyadda (* 12 *) maamulka in ay ku bixiso waqti badan oo lagama maarmaan ah si ay u bartaan sida qalabka iskaashiga (* 12 *) ay doorteen u shaqeeyo oo la wadaago macluumaadkan shaqaalaha. Aqoontaani maaha oo kaliya ka dhigaysa wakhtiga mid wax soo saar badan, waxay u ogolaataa qof walba inuu wax barto waqti ka dib. Xulashada ugu fiican (* 12 *) tignoolajiyada had iyo jeer waxay ahaan doontaa ta ay shaqaaluhu horeba u isticmaaleen: Zoom, Teams iyo Webex. Malaha wali maaha FaceTime
[Sidoo kale akhri: Adkeysiga ganacsiga: iOS, Qalabka Mac ee iskaashiga fog]
Ka fiirso waxa ku jira
Si taxadar leh uga fakar
“Kulamada oo dhan isku mid maaha. Nooc kasta (* 12 *) kulanku wuxuu u baahan yahay hab ka duwan," ayuu yidhi Gartner.
Waa run. Xoog saaristu way adagtahay (* 12 *) in lagu hayo xaaladaha ugu wanaagsan (* 12 *) oo waliba aad u adag marka la shaqaynayo (* 12 *) meel fog. Haddii kulammadaadu u baahan yihiin isticmaalka (* 12 *) bogag, waxay macno samaynaysaa inaad iska ilaaliso bandhigga nuxurka qani ku ah (* 12 *) bogagga oo samee wax kasta oo ay ku qaadato si aad u fududayso bandhiggaaga.
Shan slides oo soo noqnoqda ayaa had iyo jeer ka fiicnaan doona shan jahawareer.
Milicsiga sidoo kale wuxuu ku fidsan yahay wuxuu sameeyo ka hor iyo ka dib (* 12 *) shirarka.
Shirkadaha qaar ayaa abuuraya (* 12 *) Kanaallo caajis ah oo kaqeybgalayaashu isticmaali karaan si ay uga warbixiyaan fikradaha, arrimaha, iyo welwelka ka hor (* 12 *) shirarka iyo inay qabtaan fikrado kasta oo soo bixi kara ka dib.
Qof waa in loo xilsaaraa (* 12 *) inuu soo qabto oo faafiyo macluumaadka waxtarka leh (* 12 *) kanaalkaas (ama kanaal kasta oo la doortay) si uu u muujiyo macluumaad dheeraad ah iyo qodobbo (* 12 *) ficil.
Xusuusnow in aad diiwaan geliso qodobbada waxqabadka (* 12 *) ee lagu heshiiyey intii ay shirarku socdeen. Ururo badan ayaa qaba in xasuustu ay ku filnaan doonto ka dibna ay la yaabaan maxaa qaldamay markii, lama huraan, aysan dhicin. Aqoonsiga, aqbalida iyo gaaritaanka ujeedooyinka gaarka ah ayaa lagama maarmaan u ah maaraynta shaqada fog.
Yaa ku jira liiska?
Kulamada isku-dhafka ah (* 12 *) iskaashiga fog ayaa si fiican u shaqeeya haddii diiradda la saaro.
Markaad (* 12 *) go'aaminayso cidda shirka ka qayb-galaysa, sidoo kale tixgeli doorka iyo wax ku biirinta (* 12 *) qof kasta oo hubi (* 12 *) tan la yaqaan ka hor inta aan la aqoonsanin wax-qabadyada.
Waxa kale oo aad ka faa'iido badan in la martigeliyo taxane (* 12 *) shirar yaryar iyo kuwa gaaban marka loo eego dhacdo weyn oo hal-hal ah. Ma aha oo kaliya in nuxurka (* 12 *) shirka lagu saleyn karo xirfadaha (* 12 *) koox kasta, laakiin ka qaybgalka sidoo kale waa la horumarin karaa.
Mustaqbalka Waqtiga (* 12 *) Warbixinta Adobe ayaa xustay in kala bar (* 12 *) shaqaaluhu ay dareemeen cadaadis ah inay mar walba diyaar ahaadaan, badankooduna ay ku adkaatay inay ilaaliyaan xuduudaha u dhexeeya shaqada iyo wakhtiga gaarka ah. Gartner waxa kale oo uu tilmaamay in loo baahan yahay (* 12 *) in la baabi'iyo shirarka qof kastaa si qoto dheer uga xaajoodo mushkiladda, laakiin aan lagu heshiin karin (* 12 *) xal togan.
Waqti u qaado shaqaalaha
Haddii qof buko, ha hadlo. Meel u samee dadka, ma aha oo kaliya shaqada. Xirfadaha jilicsan ayaa xitaa aad muhiim u ah marka la dhexgalayo fiidiyowga, iyo dhowr (* 12 *) daqiiqado isku xirnaanta ayaa kaa caawin kara inaad kooxdaada sii wadato.
Shaqada fog waxay ka dhigan tahay in kooxuhu inta badan u shaqeeyaan (* 12 *) si isku mid ah. Laakin waxa aan dhici karin waa lumin isku duubnida kooxda marka dadka qaar ay si joogta ah u awoodi waayaan inay kulmaan sababo la xiriira ballanqaadyo xirfadeed ama shaqsiyeed oo ku jira adduun isku mid ah.
Halkii (* 12 *) ku adkeysiga shirarka sida joogtada ah loo qorsheeyay, bedesho waqtiyada si aad ugu ogolaato xubno badan (* 12 *) kooxdaada inay ka qaybqaataan ugu yaraan qayb ka mid ah wakhtiga.
"93% (* 12 *) shaqaaluhu waxay rabaan dabacsanaan marka (* 12 *) ay shaqeeyaan," ayuu yidhi Subramanian. Gartner waxa kale oo uu ku talinayaa in la isticmaalo wakhtiyada shirarka aan caadiga ahayn (* 12 *). Waxay aaminsan yihiin in (* 12 *) 50 iyo 10 daqiiqo wada hadal ah ay si wax ku ool ah u bedeli karaan (* 12 *) fadhiyada dheer.
Wax ka dabciga
Adeegyada Ganacsiga Orange, shaqaaluhu waxay heleen fursad (* 12 *) inay u adeegsadaan agabka shirkadda (* 12 *) iskaashiga (* 12 *) ee isdhexgalka shaqsiyeed inta lagu jiro cudurka faafa.
Iyadoo noocaan ah (* 12 *) is dhexgalka ad hoc laga yaabo inuu ku dhamaado muujinta dhibaatooyinka gudaha (* 12 *) ganacsigaaga, sida ugu habboon waa inay gacan ka geysato dhisidda wadajirka kooxda iyo ilaalinta niyadda. Hoggaamiyaha ganacsiga ee isku xiran wuxuu rabaa inuu xalliyo (* 12 *) mashaakilaadka HR, ma baabi'iyo.
Waqti ka dhig
Kulan kastaa wuxuu leeyahay dad ku hadla oo xanbaarsan. Kuwa hadlayaa waxay u muuqdaan kuwo si fiican u kacsan, halka kuwa xantu odhan karaan erayo kooban, laakiin weli waxay u baahan yihiin in la maqlo.
Waxaa jira dhowr habab oo tan loo maro, laakiin hal shay oo shaqeynaya ayaa ah in la hubiyo (* 12 *) in ujeeddooyinka (* 12 *) shirka ay si cad u qeexan yihiin munaasabadda ka hor iyo in la hoggaamiyo isdhexgalka si loo hubiyo in qof kastaa leeyahay fursad (* 12 *) ay isku muujiyaan iyo in go'aannada (* 12 *) lagu gaaro (* 12 *) miisaaniyad qeexan. .
Miyaad haysataa saddex go'aan oo aad ku gaadho saacad (* 12 *) kulan? Markaa dooda ugu badan waxay noqon doontaa (* 12 *) 20 daqiiqo midkiiba.
Haddi go'aan aan lagu gaadhi karin gudaha (* 12 *) wakhtigan, fadlan u wareeg si aad dib ugu eegto ama aad mawduuca xiga si aad ugu noqoto dooda dhamaadka.
Wadashaqeynta fog-fog ee fiidiyowga (* 12 *) waxay noqon kartaa mid xad dhaaf ah, marka waxaa macno leh in si wax ku ool ah loo maareeyo waqtiga (* 12 *).
Akhlaaqda wanaagsan ayaa muhiim ah
Waxa kale oo muhiim ah in lagu heshiiyo xeer cad oo shir ah (* 12 *) anshaxa (* 12 *) oo loogu talagalay in dhammaan dhinacyada la siiyo fursad (* 12 *) si ay ra'yigooda u dhiibtaan, iyadoo la saarayo qaar ka mid ah kuwa jecel. doodii.
Waxaan la shaqeeyay qaar ka mid ah ururada iskaa wax u qabso ah oo soo rogay "miisaaniyad (* 12 *) waqti" si loo gaaro yoolkan. Tilmaamahani waxay noqon karaan shuruudo lagu xaddidayo wax ku biirinta, tusaale ahaan, 30 ilbiriqsi kasta.
Waqti ka dhig mid aad u yar
Waxaa jira hab labaad oo sidoo kale shaqayn kara: ururada qaarkood waxay hayaan nooc ka mid ah (* 12 *) wada sheekaysi (* 12 *) kulan furan, oo soconaya waqti dheer oo muuqaal ah (* 12 *) shirarka aan jadwal lahayn ama sugin.
Kuwaani waxay noqon karaan kulano toos ah oo kooxihiinu ay ku sii wadi karaan ka qayb qaadashada shaqada ay u baahan yihiin si ay u qabtaan, mararka qaarkoodna waydiistaan ​​caawimo, talo, ama kaliya isdhexgalka aadanaha.
Codsiyada sida Teamflow ama Asana waxay sidoo kale gacan ka geysan karaan abuurista noocaan (* 12 *) meel bannaan.
Waan isku xireynaa, dhammaanteen waan isku xireynaa
Dhaleeceynta ka dhanka ah shaqada telefishinka ayaa sii wadata inay si madax adeyg ah u guuleysato iyadoo maamulku uu la tacaalayo xaqiiqada cusub (* 12 *) ee ah in mustaqbalka shaqadu uu ku saleysan yahay guuleysiga halkii uu joogi lahaa.
Tani waxay ka dhigan tahay ficil ahaan in kuwa shakhsi ahaan u soo xaadira shirarka (* 12 *) goobaha shaqada ee isku-dhafka ah ay ku dhamaanayaan inay ka faa'iidaystaan ​​kuwa ka fogaada.
Mid ka mid ah dariiqo (* 12 *) si looga fogaado tan waa in la isku raaco in marka xubin kooxeed u baahan yahay inuu galo kulanka, dhammaan xubnaha kooxdu waxay u baahan yihiin inay sidaas sameeyaan. Tani waxay kaa caawinaysaa yaraynta ceebayntan waxayna ka qaybgalayaasha saaraysaa sinnaanta (* 12 *).
Immisa apps ayaad shaqaalaha waydiisaa inay u isticmaalaan wada shaqayn?
Mustaqbalka Waqtigan (* 12 *) Warbixinta Adobe ayaa daaha ka qaaday in isticmaalka (* 12 *) codsiyada badan ay keeni karto walaac iyo gubasho. "Waxaan si sahal ah u dareemi karnaa qulqulka tirada (* 12 *) kanaalada iyo aaladaha ay tahay inaan la macaamilno adduun fog," Naomi Ionita, lammaane (* 12 *) Menlo Ventures ayaa ii sheegtay.
Sideed uga dhigi kartaa shirarkaaga fog kuwa waxtar leh oo ka jaban? I soo sheeg waxa ku anfacaya
I raac Twitter-ka ama igu soo biir baarka & dubay (* 12 *) AppleHolic iyo kooxaha (* 12 *) doodaha (* 12 *) Apple on MeWe.